नेपाल आज | प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक संस्था न्यायपालिका हो: अरुन्धती राय
प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक संस्था न्यायपालिका हो: अरुन्धती राय
'लेख्न नसके जेल बस्नु राम्रो'
सोमबार, १५ माघ २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (RP)
अरुन्धती राय भारतकी मात्र नभएर दक्षिण एसियाकै सार्वाधिक चर्चित लेखिका तथा सामाजिक अभियन्ता हुन् । भारत प्रशासित कस्मिर तथा माओवादी प्रभावित क्षेत्रहरूमा सरकारी दमनको खुलेर विरोध गर्ने लेखिकाले लामो समयदेखि गरिब, आदिवासीको पक्षमा लेख्ने र बोल्नै गर्दै आएकी छन् । आफ्नो पहिलो उपन्यास ‘द गड इज स्मल थिङ्ग्स’ले बुकर पुरस्कार जितेको २० वर्षपछि ‘द मिनिस्ट्री अफ अटमोस्ट ह्यापिनेस’ (The ministry of Utmost happiness) लेखिन्, जुन दक्षिण एसियामै अत्याधिक चर्चामा छ । ‘कबाडखाना डटकम’ मा प्रकाशित उनको यो अन्तरवार्ता नेपालका पत्रकार नरेश ज्ञवालीले अनुवाद गरेका हुन् ।
भारतीय समाजलाई तपाईं कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुन्छ र ?
तपाईं कैयौं पटक समाजको सर्वहारा वर्गको पक्षमा उभिएको देखिनुहुन्छ, यसको पछाडि के कारणहरू रहे र ?
मेरो विचारमा दुई किसिमका मानिसहरू हुन्छन् । पहिलो, जसको शक्तिशाली मानिसहरूसँग नेचुरल एन्लाइटमेन्ट ९प्राकृतिक अन्तरघुलन० हुन्छ र दोस्रो प्रकारका मानिसहरू ती जोसँग केही पनि छैन । जनतासँग शक्ति त अथाहा छ । तर मुलुकमा जे हुँदैछ, त्यसलाई कसरी सही ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसको सही विधि बुझ्न सकिएको छैन । यदि कोही प्रधानमन्त्री नै बन्यो भने पनि त्यसले यी सबै कुरा सुधार्न सक्दैन । मलाई माथिबाट कुनै सुधार हुन्छ भन्ने लाग्दैन, सुधार तल्लो तहदेखि मात्र सम्भव छ ।
गान्धीवादी माहोलको प्रतिरोध अब काम लाग्दैन । यसलाई पूरै ओभर ल्याप गर्ने गरी एनजीओरआईएनजीओ आइसकेका छन् । तिनीहरूले मानिसलाई कि त फुटाइदिन्छन् कि किन्छन् । मलाई लाग्छ, यदि कुनै आमूल परिवर्तनकारी समाधान खोजिँदैन भने समग्र मुलुकमा अपराध बढेर जान्छ ।
अहिले मुलुकको विकास दर १० प्रतिशतको वरपर छ । सरकारी तथ्याङ्कमा २६ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि छन्, प्रत्येक वर्ष अर्बपति मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ । सेन्सेक्सले सधैँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने गरी उचाइमा छ, विदेशी पुँजीको प्रवाह पनि राम्रो रहेको छ । यो पूरै सञ्जाललाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ रु
यो जे हुँदैछ, त्यो ठीक होइन । यी कुराहरू तिनीहरूलाई राम्रो लाग्दैछ होला जो, निजी कम्पनीका सीईओ हुन्, जसको स्टक एक्सचेन्ज निकै बढी रहेको छ । यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्नेछ । मलाई लाग्छ गान्धीवादी माहोलको जुन प्रतिरोध हो, त्यो अब काम लाग्दैन । यसलाई पूरै ओभर ल्याप गर्ने गरी एनजीओरआईएनजीओ आइसकेका छन् । तिनीहरूले मानिसलाई कि त फुटाई दिन्छन् कि किन्छन् । यस्तो वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने हल के हो रु समाधानको कुनै विधि छ कि छैन रु हामीलाई केही थाहा छैन । मलाई लाग्छ यदि कुनै आमूल परिवर्तनकारी समाधान खोजिँदैन भने समग्र मुलुकमा अपराध बढेर जान्छ ।
सरकारका नीतिहरू समाधानको सट्टा जनताको हितविपरीत कसरी जाँदै छ र?
आज तपाईं जेसुकै गर्नुस्, सरकार, प्रहरी र सेनाले दमन गरिहाल्छ । पहिले इस्लामिक आतङ्कवादको नाम लिइन्थ्यो । तर उनीहरूले इस्लामिक आतङ्कवादमा सबैलाई समेट्न सकिँदो रहेनछ भनेर बुझे । मुसलवान बाहेकका अन्यलाई कसरी थुन्ने त रु भन्दा अब जो मान्छे इस्लामिक आतङ्कवादको श्रेणीमा पर्दैन्, ती सबैलाई माओवादी आतङ्कवादी बनाइदिने गरिएको छ । त्यसकारण राज्यका लागि आतङ्कवादको दायरा बढ्दैछ ।
अहिले छत्तीसगढमा जे–जस्तो हुँदैछ, त्यस्तै कोलम्बिया जस्ता मुलुकमा पनि भएको थियो । त्यहाँ सरकार आफैले एउटा पिपुल मिलिसिया ९भारतमा सलमा जुडुम र नेपालमा माओवादी प्रतिकार समूह भने जस्तै० उभ्याइदियो र विद्रोहीहरूसँग तिनीहरूलाई भिडायो र गृहयुद्धको जस्तो अवस्था सृजना गर्यो । जब सबै मानिसहरू छद्म युद्ध हेर्दै थिए, त्यति नैबेला एउटा ठूलो कम्पनीले आदिवासीहरूको क्षेत्रमा गएर खनिज उत्खनन् गर्न थाल्यो । ठ्याक्कै त्यस्तै आज छत्तीसगढमा हुँदैछ । मानिसहरूलाई रणभुल्लमा पार्न यिनीहरू ९सरकार० निकै सिपालु छन् ।
पछिल्लो डेढ–दुई दशक यता हाम्रो मुलुकमा उपभोक्तावादी संस्कृति निकै हावी भएर जाँदैछ तपाईंको बुझाइमा समाजमा यसको कस्तो असर परिरहेको छ र ?
केही दिनअघि पत्रिकामा एउटा ठूलो विज्ञापन सपिङ रिवोल्युसन ९खरिद क्रान्ति०का सम्बन्धमा आएको थियो । मलाई लाग्छ भारतमा उदारीकरणको जुन नीति आएको छ, यसले मध्यम वर्गलाई विस्तार गरेको छ । आज हाम्रो मुलुकमा धनी–गरिबको बीचको खाडल बढ्दै गइरहेको छ । धनी झनै धनी हुँदैछन् भने गरिब झनै गरिब । उदाहरणका लागि एक सय जनालाई गाँस, बास, कपास, पानी र यातायातको सुविधा दिइन्छ, जब कि अधिकांश मानिसहरू यसबाट वञ्चित नै रहन्छन् ।
यदि तपार्इंले भारतको नाप–नक्सा हुर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ । जहाँ जङ्गल छ त्यसको तल खनिज–सम्पदा छ । अब तपाईंसँग विकल्प छ । जङ्गल काटेर मास्ने हो भने, जहाँ धेरै पैसा पनि छ तर यसले ५० वर्षमा जम्मै मुलुक सुक्छ । हाम्रा मुलुकका प्रधानमन्त्री हुन् अथवा मोन्टेक सिंह अहलुवालिया अथवा पी चीतम्बरम यिनीहरूसँग कुनै उपयुक्त नीति छैन, मात्रै देखाउने तथ्याङ्क छन् । योभन्दा खतरानाक के हुन सक्छ रु तपाईंले बिना कुनै ऐतिहासिक साहित्य अवलोकन, सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्नुको सट्टा तथ्याङ्कको भरमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ।
एकातिर अमेरिकी नीति मानवताको खिलाफमा देखिन्छ तर अर्कातिर प्रत्येक मानिस अमेरिका जाने अवसर गुमाउन चाँहदैन, यस्तो किन र?
अमेरिकाकाप्रति मलाई कुनै चाख छैन । साँच्चै भनौँ भने मलाई लतारेर लगे पनि म फर्किएर आउँछु । यति यान्त्रिक जीवन बिताउन त के मैले सोच्नसमेत सक्दिन । तर यदि तपाईं कुनै गाउँको दलित हो भने तपाईंले त्यहाँ समानरूपमा पानी खान पाउनु हुन्न । कसैका अगाडि जान तपाईंलाई निषेधित गरिएको छ भने त्यति नै बेला तपाईंलाई अमेरिका जाने अवसर आए तपाईं किन नजाने रु तर पनि अमेरिका धेरै जसो नेताहरूका र उच्च पदस्त कर्मचारीहरूका केटाकेटीहरू नै जान्छन् । तर सत्य के हो भने यो खतरनाक प्रवृत्ति हो ।
कसरी खतरनाक ठान्नु हुन्छ र ?
पहिले इस्लामिक आतङ्कवादको नाम लिइन्थ्यो । पछि उनीहरूले इस्लामिक आतङ्कवादमा सबैलाई समेट्न सकिँदो रहेनछ भनेर बुझे । मुसलमान बाहेकका अन्यलाई कसरी थुन्ने त रु भन्दा अब जो मान्छे इस्लामिक आतङ्कवादको श्रेणीमा पर्दैन, ती सबैलाई माओवादी आतङ्कवादी बनाइदिने गरिएको छ ।
भारतीय लेखनको वर्तमान समयलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ र ?
भारतीय लेखन भनेको के हो रु मैले यसलाई मान्दिन । के जसले अङ्गे्रजीमा लेख्छन् तिनी अलग हुन् रु हिन्दी अथवा भोजपुरीमा लेख्नेहरूमा यस्तो छैन । अङ्ग्रेजीका भारतीय लेखकहरू कथालाई घुमाई फिराई गरेर पाठकलाई सन्देहमा पार्ने गर्छन् ।
भारतीय ‘भाषाई’ लेखनको भविष्य कस्तो देख्नु हुन्छ र ?
कस्तो लाग्छ भने, कुलीन वर्गका केटाकेटी समाजसँग पूरै काटिएका छन् । यसको के कारण हुन सक्ला र ?
तपाईंले ठीक भन्नुभयो, आजका कुलीन वर्गका केटाकेटी पूरै समाजसँग काटिएका छन् । केही दिनअघि यसै वर्गकी एउटी केटीले मसँग भनी– अरुन्धती तिम्रो किताब ‘द अल्जेब्रा अफ इन्फिनिट जस्टिस’ मैले भाइलाई पढ्न दिएको त उसले बडो अचम्म गरी आदिवासीहरूको विषयमा भन्यो, ‘भारतमा यस्ता खाले प्राणी बस्छन् र रु’
तपार्इं अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा गएर त्यहाँका सरकारका नीतिविरुद्धमा लेखिराख्नु हुन्छ, यस्तो लेख्ने साहस तपाईंले कसरी देखाउन सक्नु भएको र ?
जब ९र११ को घटना भयो, त्यसबेलादेखि मैले यस घटनामा धेरै नै सोच–विचार गरेँ । त्यसपछि मैले निर्णय गरेँ, यदि म लेखका हुँ भने मैले यसमा लेख्नुपर्छ । यदि लेख्न सकिन भने जेलमा बस्नु मेरा लागि धेरै राम्रो हो । यो निर्णय मैले फ्याटै गरेँ र लेखेँ । तर भारतमा धेरै नै लोलो–पोतो दल्ने मान्छे छन् । यहाँ जर्ज डब्ल्यु बुसका खिलाफ लेख्ने मान्छे सारै थोरै छन् ।
जब कि अमेरिकाविरुद्ध बोल्ने धेरै भेटिन्छन् । भियतनामको युद्धका विरुद्ध अमेरिकामा जति विरोध भयो, त्यो एउटा मिसाल हो । सैनिकहरूले आफ्नो मेडल फर्काइदिए । के भारतमा यस्तो सम्भव छ रु कस्मिरको मुद्दामा सेनाले केही पनि बोलेन । यो स्थिति आउनुभनेको दुःखद हो ।
न्यायपालिकालाई लिएर तपाईंको भनाइ निकै चर्चामा रह्यो । मुलुकमा न्यायिक सक्रियताको बाबजुद न्यायिक ढाँचा जर्जर छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ र ?
मलाई लाग्छ प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक संस्था न्यायपालिका हो । किनकि यसले आफूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त राखेको छ । ‘कन्टेम्ट अफ कोर्ट’ ९अदालतको मानहानी० ले सबैलाई तर्साइदिएको छ । तपाईं यसका खिलाफ केही पनि गर्न सक्नुहुन्न । प्रेसले पनि केही गर्न सक्दैन । तपाईंले आदेशहरू हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, अदालतले कति गैरजिम्मेवार ढङ्गले निर्णय गर्छ । प्रजातन्त्रमा न्यायपालिका यति शक्तिशाली हुनु ठीक होइन ।
जल, जङ्गल र जमिनको मुद्दामा तपाईं निकै काम गर्नु हुनुहुन्छ, जसरी जङ्गल बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई दिइँदै छ र आदिवासीलाई उनीहरूको अधिकारदेखि वञ्चित गरिँदैछ । यसको भविष्य तपाईंले कुन रूपमा देख्नु हुन्छ र ?
मलाई लाग्छ प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक संस्था न्यायपालिका हो । किनकि यसले आफूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त राखेको छ । ‘कन्टेम्ट अफ कोर्ट’ ९अदालतको मानहानी० ले सबैलाई तस्र्याइदिएको छ । प्रजातन्त्रमा न्यायपालिका यति शक्तिशाली हुनु ठीक होइन ।
आज बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले खनन गरे बापत यिनीहरूलाई मोटो रकम दिइरहेका छन् । यो कुरा सत्य हो । तर आजभन्दा पचास वर्षपछिको भविष्य के हुने रु एउटा वेदान्त नामको कम्पनी ओडिसामा बक्साइट निकाली रहेको छ । जबकि त्यसले त्यसो गरेबापत त्यहाँ विकासको कुरा पनि गरिरहेको हुन्छ । तर जहाँ बक्साइटको भन्डार छ, त्यहीँबाट ओडीसावासीलाई पानी उपलब्ध हुने गरेको छ । अब तपार्इं आफै भन्नुस्, त्यसलाई सिध्याउँदै गर्दा त्यहाँ पानीको कमी हुन्छ कि हुँदैन रु त्यसैले सरकारले छोटो समयको फाइदाका लागि लामो समयको नोक्सान हुने नीतिमा लिइरहेको छ ।
आतङ्कवाद हिजोभन्दा आज धेरै डरलाग्दो मुद्दा बनिसकेको छ । यस चुनौतीसँग सामना गर्न दुनियामा जेसुकै पहल हुँदैछन् । त्यसमा मुलुकहरूको आपसी गुटबन्दी नै धेरै देखिन्छ । आतङ्कवादको चुनौतीसँग सामना गर्ने कारगर तरिका के हुन सक्छ र ?
हजारौँ मानिसलाई घरबारविहीन बनाउने उद्देश्य के हो रु असली आतङ्कवादी उनीहरू हुन्, जसले नन्दीग्रामबाट मानिसलाई भगाउँदै छन् । कलिङ नगरमा गोली चलाइरहेका छन् । जहाँसम्म विश्वस्तरमा आतङ्कवादको समस्यासँग जुध्ने कुरा छ । मलाई लाग्छ यसका लागि कुनै गम्भीर प्रयासहरू भइराखेकै छैनन् । सबैल आआफ्नो लाभको प्रकृति हेरिकन आतङ्कवादको खिलाफ कारवाही गर्ने हुन् ।
तपाईंका विचारमा वामपन्थी प्रभाव धेरै झल्किन्छ । यसको कारण के हो र ?